Simba reKusarudzika Kwega | Martech Zone
Rangarira apo Nike yakaunza yavo Just Do It Campaign? Nike akakwanisa kuwana hukuru hwekuziva chiziviso uye chiyero nesirogani iri nyore. Mabhodhi, TV, redhiyo, purinda… 'Ingozviita' uye iyo Nike swoosh yaive kwese kwese. Kubudirira kwemushandirapamwe kwaive kwakatarwa nevanhu vangani vaNike vaigona kuona nekunzwa iwo meseji. Iyi nzira chaiyo yaishandiswa nemazhinji makuru mabhurandi panguva yekushambadzira kwemazhinji kana 'nguva yemushandirapamwe' uye nekuwanda ikanzwika nevatengi uye kutyaira kutengesa. Misa kushambadzira yakashanda.
Nekukurumidza kumberi angangoita makore makumi matatu, pinda muInternet, nharembozha uye midhiya enhau, uye isu tiri kurarama mune yakasarudzika nguva. Semuenzaniso, vanhu vakashandisa $ 25 bhiriyoni pakutenga kwakaitwa kubva kumafoni uye mapiritsi muna 2012 chete, 41% yeemail yakavhurwa pane nhare mbozha uye munhu wepakati anoshandisa maawa matanhatu pamwedzi paFacebook. Dhijitari tekinoroji inoenderana nehupenyu hwevatengi uye semhedzisiro, vatengi vanoda zvimwe kubva mukubatana kwavo nemhando. Ivo vanoda kunzwa kubva kumabhureki pane chaiyo chiteshi, panguva chaiyo uye nemameseji akakodzera. Kutsigira izvi, a ichangopfuura Mhinduro dzevatengi kuongorora akawana zvinotevera:
Kuwedzera kwevatengi chishuwo chekuve nehukama hwehukama nemabhureki zvechokwadi kwachinja mutambo wevatengesi. Zvinotora hunyanzvi hwetekinoroji uye kushambadzira zvine hungwaru kukudziridza hukama hwakareba hwevatengi uye kukanganisa mutsetse wezasi. Nhasi, vatengesi vanofanirwa kuendesa zvakasarudzika zviitiko zvevatengi pamhando dzakasiyana dzemadhijitari - uye padanho rakakura.
MetLife muenzaniso wakanaka. Kana mutengi akashanyira Webhusaiti yeMetLife kuti abvunze nezve inishuwarenzi, kumashure kwezviitiko, ivo vakapinda muchirongwa chakasarudzika chakagadzirirwa kubatsira mutengi kupedzisa kazhinji maitiro akaomarara. Inotanga paWebhu saiti, asi inogona kuenderera kuburikidza neemail, kuratidza uye SMS yezviziviso uye zvikumbiro zvekutevera. Pakati penzira, mameseji anoenderana neakanangana nemutengi wega. Yaitwa mushe, chirongwa ichi chinoguma neruzivo rwevatengi, nepo ichikurudzira mutengi kupedzisa maitiro uye kuve mutengi weMetLife. Mune imwe nyaya yakadai neMetLife, iyi orchestration yekutengesa meseji munzira dzedigital yaive nepamusoro kugutsikana kwevatengi kupfuura echinyakare, chinofambiswa nemumiririri.
The Mhinduro Dzinopindirana Kushambadzira Cloud inovakwa kubatsira vashambadzi kuita iyi mhando yekutengesa orchestration. Chikuva ichi chakanangana nekutenderedza mutengi, zvichitsanangudza nzira iyo vashambadzi vakakurisa venyika vanogadzirisa hukama hwavo hwemadhijitari uye kuendesa kushambadzira kwakakodzera kune vatengi vavo paemail, nhare, zvemagariro, kuratidza uye newebhu. Uye, inopa zvikwata zvekushambadzira pamwe chete, mushandirapamwe wekugadzirisa kuronga, kuita, kugadzirisa uye kuronga akawanda-masiteji, echinjika-chiteshi kushambadzira zvirongwa. Iyo Inopindirana Yekushambadzira Cloud inopa vashambadzi kushandisa yavo data, yavo nzira, kuendesa iwo akakosha meseji iyo inochengetedza vatengi kuita uye kutenga mukati mehupenyu hwese hwehupenyu.
Tags: muchisoEmail MarketingMarketingkushambadzira mameseji. emailPersonalizationyemunhu email kushambadziramunhu zvichienderana mamesejimhinduro
Kyle Christensen ndiVP weKushambadzira Kwechigadzirwa pa Mhinduro uko kwaanoona nezve kutyaira chigadzirwa kushambadzira zano uye kumisikidza iyo Responsys Inopindirana Kushambadzira Cloud. Munguva pfupi yapfuura, Christensen aive Senior Director weChigadzirwa Kushambadzira uye manejimendi kuZuora, kwaakatungamira zvese kushambadzira kwezvigadzirwa uye manejimendi manejimendi kune ayo akakosha Z-Billing uye Z-Kubhadhara kunyorera. Asati aZuora, Christensen akatanga uye akamhanyisa kushambadzira kwechigadzirwa kune akawanda maSalesforce.com zvigadzirwa mitsara, kusanganisira Sevhisi Cloud uye Data.com.
Planspot: Kurudzira uye Tengesa kunze Zviitiko zvako